हेर्नुस् ! भुपेन्द्र बडुवालमा आधारित पहिलो चलचित्र ,यसरी हानिएको थियो खु कुरि (हेर्नुस् भिडियो ) -
Home News हेर्नुस् ! भुपेन्द्र बडुवालमा आधारित पहिलो चलचित्र ,यसरी हानिएको थियो खु कुरि...
रातको करिब ८ बजे तिर आफ्नै साथीलाई के भयो भनेर घरबाट निस्किएका भुपेन्द्रलाई तिनै आफ्नै साथिले सडकमा दौ’डा’ई दौ’डा’ई ह’त्’या गरेका हुन । भुपेन्द्र उनिहरुबाट भागेर बाच्न निकै प्रयास गरे पनि उनी सफल हुन सकेनन ।
भुपेन्द्र केही दिनमा नै अ’मेरिका जाने तयारीमा थिए । अमेरिका जाने खुशिमा उनी साथिहरुसगँ केहिदिन यता सगै घुम्ने, खाने, खेल्ने गर्नमै ब्यास्त थिए । तर उनले त्यो खुशी भने पाउन सकेनन ।
कैलालि जिल्लाको टिकापुर लम्किचौवाका भुपेन्द्रलाई साथिहरुले नै घ’रबाट लि’एर बाटोमा लगेर योजनाबद्ध तरिकाले ह’त्’या गरेको खुल्न आएको छ । उनलाई आठ जना साथिहरुले मिलेर योजनाबद्ध तरि’काले ह’त्’या गरेका हुन । अहिले प्र’ह’रीले ह’त्’या’मा संलग्नलाई प’क्रा’उ गरेको छ ।
Previous articleवैदेशिक रोजगारमा श्रममन्त्रीको छड्के: हाकिमसंग पर्यो चर्काचर्की, कुरा होइन काम गर्नुस भन्दै थर्काए (भिडियो हेर्नुहोस)
Next articleExclusive: बाबा रामदेवलाई नेपालमा VIP स्वागत, एयरपोर्टमै खुट्टा ढोग्नेको घुइचो | बाबा रामदेवले चन्द्रागिरी डाँडामा बसेर योग प्रशिक्षण दिने (भिडियो हेर्नुहोस)